Photovoltaic simba rezuva, mutungamiri pakati pezvinodzoreredzwa | Green Renewables
Photovoltaic simba rezuva, mutungamiri pakati pezvinodzoreredzwa
Sekureva kwa CEO weInternational Energy Agency (IEA), Fatih Birol: Solar photovoltaic yaive kekutanga sosi yesimba nyowani yakakura nekukurumidza muna 2016. Iyo agency yakatsanangura iyo data se "yakanakisa nhau".
Mukutumira mushumo wako wegore Kuvandudzwa 2017, Birol akataura kuti "mushure mekuongorora mhando dzese dzemafuta - oiri, gasi, marasha, zvinowedzerwazve - uye zvazvinoreva mumisika yesimba, iyo yakanangana nezviratidzwazve Nhau dzakanaka kwazvo dzeindasitiri".
1 Simba rezuva
2 Hondo yesimba iri makore makumi maviri pamberi
3 Simba rezuva rinogona kukwikwidza nechero ani
4 Solar mapaneru anoshanda neakaderera insolation
4.1 Chinyorwa chitsva chinotora mwenje wakawanda wezuva
Kuongorora kwe2016 kwakaratidza kuti nyowani yezuva PV (photovoltaic) kugona kwakakura ne50% uye kuti China yaive nyika iyo inodaidzirwa kuti hafu yesimba rayo. kuwedzera kwepasirese. "Shure kwenyaya yekubudirira yezvinhu zvinowedzerwazve, tinowana vatyairi vaviri vakuru: rutsigiro rwakasimba kumatongerwo ehurumende nekuvandudzwa kwetekinoroji," akadaro maneja.
Pakaburitsa pfungwa dzakakosha dzerugwaro, Birol akasimbisa kumhanya kwakakura kwakaita simba rezuva rePV gore rapfuura, iro kekutanga kukunda kukura kwemamwe magetsi.
Sekureva kweshumo, zvinowedzerwazve zvakave zvinoda kusvika zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvesimba nyowani yesimba renyika gore rakapera, angangoita 165 gigawatts, uye icharamba ichiita simba rakasimba kwemakore anotevera. Iwo mavara akafungidzira kuwedzera kwemagetsi emagetsi emagetsi e2022% pamberi pa43.
Muchokwadi, simba rezuva, iro rakachipa pamusoro pegore rapfuura zvinopfuura 75%, yatove yakachipa kudarika chero imwe mhando yesimba inogadzirwa nemarasha, mafuta kana gasi.
Izvi zvese zvakanaka, asi hazvina kukwana. Kana simba rezuva richida kuve mutambi wepasirese, zvinofanirwa kuve inobatsira kupfuura mamwe masosi emagetsi epfupi: Parizvino yatove, mukuwedzera, munyika dzinopfuura makumi mashanu, simba rezuva ndiro simba rakachipa pane ese.
Hondo yesimba iri makore makumi maviri pamberi
Kunyangwe isu tichiwanzo tarisa pamutengo wekugadzirwa pa kilowatt awa, hausi iwo mutengo unonyanya kufadza wekutorwa yesimba rinowedzerwazve. Zvirinani, mumamiriro ezvinhu senge yazvino iyi izvo zvigadziriso zvisina rubatsiro rwekubhadhara mari.
Masisitimu emagetsi ane hofori zvivakwa mune mari anoitwa aine akati wandei makore ekutarisira, kunyangwe makumi emakore. Ndicho chimwe chezvikonzero nei kugamuchirwa kwezvinhu zvinowedzeredzwa kunonoka: kamwe kanyukireya, gasi, marasha (kana chero imwe mhando) chirimwa chakavakwa, hazviiti kuti chivhare pasi kusvika kumagumo ehupenyu hwayo hunobatsira. Dai zvaive, kazhinji iyo Investment yaisazotorerwa, izvo zvisiri kuzoitika nekuda kwema lobbies makuru kunze uko.
Mune mamwe mazwi, kana isu tichida kudzidza zvakadzama kuti kuumbwa kwemusika wesimba kuchachinja sei, tinofanirwa kutarisa kuti zvinoda marii kutanga simba rimwe nerimwe kubva pakutanga. Iyo ipfupi nepakati nepakati purofiti yemagetsi magetsi yakakosha muchisarudzo chekupedzisira chebhizimusi nevezvematongerwo enyika; Kana, isa imwe nzira, simba iro rakachipa kwazvo kuburitsa uye rinoda yakakwira kwazvo mari yekutanga harizombofi rakagamuchirwa.
Simba rezuva rinogona kukwikwidza nechero ani
Zvinoenderana nemishumo yakati wandei kubva kune unopfuura muviri mumwe, pane indasitiri yesimba: «Simba rezuva risina kubhadharwa riri kutanga kudzinga marasha uye gasi chaiwo kubva pamusika Uye zvakare, mapurojekiti nyowani ezuva mumisika iri kusimukira ari kudhura zvishoma pane mhepo.
Uye, zvirokwazvo, mune angangoita makumi matanhatu nyika dziri kusimukira mutengo wepakati wekuisirwa kwezuva kunodiwa kuburitsa megawati yega yega kwadonha kusvika pamadhora chiuru mazana matanhatu nemakumi matanhatu, pazasi pezana nemazana matanhatu nemakumi matanhatu emakumi matanhatu emagetsi anoshandiswa nemhepo.
Sezvatinogona kuona mugirafu yapfuura, iyo shanduko yakajeka. Izvi zvinoreva kuti nyika dzichiri kusimukira, idzo kazhinji ndidzo dzine kuwedzera kukuru kwekubuda kweCO2.
Vakawana nzira yeku gadzira magetsi pamutengo wemakwikwi uye nenzira inogadziriswazve.
Solar mapaneru anoshanda neakaderera insolation
Simba rezuva rakagara riine dambudziko hombe: huwandu hwemwenje yezuva uye meteorology. Pamazuva ane mhepo, makore, kuchinaya kana kuita mhute, huwandu hwemwenje yezuva iyo inorova iwo maseru ezuva ishoma. Naizvozvo, iwo huwandu hwesimba iro panogadzikana neremagetsi ezuva rakanyanya kushomeka. Izvi zvinotungamira mukusagadzikana mune magetsi.
Chinangwa ndechekukwanisa kuwedzera kugona mukushandurwa kwechiedza chakanangana kudzamara iwe waona yakawanda mwaranzi yezuva zvakare uye kugadzira simba rakaringana, kunyangwe iyo mamiriro ekunze ita kuti kubwinya kuderere.
Chinyorwa chitsva chinotora mwenje wakawanda wezuva
Chinyorwa chinokwanisa kutora yakawanda yezuva murazvo LPP (for its acronym in English "long-long phosphorus") uye inogona kuchengeta simba rezuva masikati kuitira kuti iunganidzwe husiku.
Chiedza chega chinoonekera chinogona kupinzwa nekushandurwa kuita magetsi, asi LPP Inogona kuchengeta simba rezuva kubva kune isina kubatwa uye padyo nemwenje wechiedza. Ndokunge, icho chinhu chinokwanisa kupinza mwenje munzvimbo yakakura senzvimbo inonzi infrared.
Isu tinorangarira kuti muganho wemagetsi emagetsi unoonekwa nevanhu inzvimbo inooneka. Nekudaro, kune akawanda marudzi emwaranzi yeakasiyana wavelengths uye kusimba senge infrared mwaranzi.
Kutenda kune aya mapaneru, huwandu hwesimba hunogona kuchengetwa kwete chete kubva kuzuva rakananga, asi mamwe matunhu emagetsi emagetsi anokwanisawo kushandurwa kuita simba remagetsi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Renewable simba » Photovoltaic simba rezuva, mutungamiri pakati pezvinodzoreredzwa
Zvatinogona kutarisira kubva kumhepo simba
China inotungamira kusimudzira kwesimba rinovandudzwa pasirese